Suavecito - Solid Cologne (Havana Tobacco - Woody & Sweet Fragrance) | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Suavecito - Solid Cologne (Havana Tobacco - Woody & Sweet Fragrance)
Suavecito - Solid Cologne (Havana Tobacco - Woody & Sweet Fragrance)
Regular price MMK 83,000
Default Title - MMK 83,000 MMK
--Long Lasting | Portable | Solid Fragrance--
Gentlemen တို့နှင့်အမြဲအတူရှိနေမဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့...
Suavecito Solid Cologne တစ်ခုတွင် အရည်အသွေးမြင့် Metal Case တစ်ခုနှင့် Fragrance တစ်မျိုးပါရှိပါသည်။
Suavecito Solid Cologne သည် သင်သွားလေရာမှာ အလွယ်တကူဆောင်ယူသွားနိုင်ပြီး၊ အချိန်နေရာမရွေး အသုံးပြုနိုင်မည့် ရမွှေးအခဲအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားရာတွင် လေယာဉ် ပေါ်သို့လည်းအလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခြားရနံ့များနဲ့မတူပဲ သင်းပြံ့မွှေးကြိုင်သော Mar Azul , Coastal Citrus နှင့် Havana Tobacco ရနံ့သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ ရနံ့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက Suavecito Solid Cologne Refill ရနံ့များ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Mar Azul = ကြည်လင်သော ပင်လယ်ရနံ့ (Aquatic & Clean Fragrance)
Coastal Citrus = လန်းဆန်းသော ချဉ်ပြုံးပြုံးရနံ့ (Citrusy & Fresh Fragrance)
Havana Tobacco = ချိုမွှေးသော သစ်ခေါက်ရနံ့ (Woody & Sweet Fragrance)
ပုံမှန်အရည်အမျိုးအစားရေမွှေးများကဲ့သို့ Alcohol များအသုံးပြုထားခြင်းမရှိပဲ သဘာဝအဆီဓာတ်များနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ရနံ့အမြန်ပျယ်သွားခြင်းမရှိပဲ၊ သင့်အသားအရည်ပေါ်မှာ သဘာဝအဆီဓာတ်များနှင့်အတူကျန်ရှိနေမဲ့ အမွှေးရနံ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းများမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သင်သွားလေရာ အလွယ်တကူဆောင်ယူသွားနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Metal Casing နှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ရနံ့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက အခြား Suavecito Solid Cologne Refill ရနံ့များ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုပုံ: ရေမွှေးအဆီကို လက်ချောင်းထိပ်များနှင့် ပွတ်တိုက်အပူပေးပြီး လက်ကောက်ဝတ်၊ လက်ဖျံ၊ နားအနောက်နှင့် လည်ပင်းတို့ကို ရနံ့လိုအပ်သလောက်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ သွားလေရာ အလွယ်တကူယူဆောင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်လည်း အချိန်မရွေး လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ထပ်မံအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင်သိုလှောင်ထားပါ။
အရည်အသွေးမြင့် Metal Casing
ရနံ့ Refill များ အလွယ်တကူပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Each Suavecito Solid Cologne *Kit* comes withahigh quality metal case andafragrance tray of your choice.
Mar Azul isarobust fragrance that will transport you to the clear, blue ocean. Clean citrus notes of bergamot and grapefruit top off this modern scent. A mix of spices and florals give body to this cologne and base notes of cedarwood and amber lend balance. You will certainly make an impression with this fragrance.
The fragrance trays easily snaps into place withamagnet into the metal case, making it simple to switch between scents or replace your used up cologne. The case fits perfectly into your pocket, backpack, or gym bag to carry it with you as you go about your day.
Suavecito Premium Blends Solid Cologne will glide easily onto your skin with natural ingredients like coconut oil and jojoba oil. They absorb into skin slowly, to give youasteady fragrance that keeps you smelling fresh throughout your day.
To Apply: Use your finger to warm the solid product and apply to pulse points - wrists, neck, and behind the ears. The waxes and oils double as moisturizers, so any excess product can be used on hair, beard, or skin. Store inacool, dry place.
Solid formula lasts longer than spray colognes
Three Fragrance Options
Refills available for easy fragrance change
Made with natural oils and waxes - non-irritating
Suavecito - Bay Rum Beard Oil
From MMK 26,000
Suavecito - OG Deodorant
From MMK 25,000
Suavecito - Solid Cologne (Mar Azul - Aquatic & Clean Fragrance)
Suavecito - Solid Cologne (Coastal Citrus - Citrusy & Fresh Fragrance)